musha More Formula One Drivers Bio Mick Schumacher Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Biography yaMick Schumacher inokuudza zvese Chokwadi chenyaya yehudiki hwake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki - Corinna Schumacher (Amai), Michael Schumacher (Baba), Hupenyu hwemhuri, Musikana/Mukadzi kuve, Mararamiro uye Hupenyu hweMunhu.
Nemashoko akajeka, tiri kukupa kuongororwa kwakazara kwezviitiko zvinozivikanwa zvakatenderedza Mick's Bio, kutanga kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakava nemukurumbira.
Tsvaga pazasi, kubva kuCradle kusvika kuKusimuka kwaMick Schumacher- pfupiso yeBio yake.
Mick Schumacher Biography - Kubva paUdiki hwake Makore kusvika panguva yaakava nemukurumbira.
Inonyanya kuzivikanwa nekutyaira nhangemutange, isu tinoziva kuti unotova nepfungwa iye ndiye mwanakomana weanozivikanwa wechiGerman mujaho mutyairi, Michael Schumacher.
Nekudaro, isu tinotenda zvakakosha kuti tizive kuti mwanakomana wake akashanduka sei, saka Bio yake. Iye zvino pasina imwezve ado, ngatitangei.
Mick Schumacher Childhood Nhau:
YeBiography Starters, ane zita remadunhurirwa rekuti 'Mini Schumi'. Mick Schumacher akazvarwa pazuva re22nd raKurume 1999.
Mick akauya kupasi kuburikidza naamai vake, Corinna Schumacher, uye baba, Michael Schumacher muVufflens-le-Château, manenji, iri mudunhu reMorges, Switzerland. Tsvaga pazasi, nzvimbo yekwaakaberekerwa.
Mick ndiye anozivikanwa mwanakomana wevabereki vemitambo. Kutanga, amai vake, Corinna Schumacher aimbova bhiza rekuMadokero akatasva mhare yeEurope.
Kune rimwe divi, baba vake, Michael Schumacher ndiye anorekodha-kutyora kanomwe-nguva Formula One shasha yenyika.
Kubva pakuzvarwa, mucheche Mick akafanirwa kuve mukuru, iro raive rakagadzirwa nababa vake vane mukurumbira. Tarira, mucheche pikicha yaMick Schumacher naBaba vake. Pasina kupokana, ramangwana rake rakaudzwa kubva achiri mudiki.
Mick Schumacher Makore Ekutanga:
Semwanakomana weyaimbove Formula One nhangemutange yerudzi, zvaive zvakasikwa kuona kutyaira mota dzemitambo ichiva yake yekutanga kufarira.
Mick Schumacher, uyo anobva kumota yemota yemota, akazviona achishuvira kuva nechido chekart kutyaira mangwanani, semwana mudiki. Pakutanga zera rechitatu, akatanga kuratidza hunyanzvi hwekuenda-karts.
Movin gon kusvika pamakore masere, Mick akazviona mumakwikwi emunyika. Panguva ino, akatanga kuve neakanyanya push kuti ave Mutyairi 1 mutyairi.
Mune imwe kudzivirira kutarisisa kukuru, ari iye mwanakomana wevakakurumbira, baba vake Mick Schumacher vakatora zita raamai vake reusikana "Betsch." Nekuda kweizvozvo, Mick mudiki akarovedza uye kurodza hunyanzvi hwake saMick Betsch.
Mick Schumacher Mhuri Yemhuri:
Waizviziva here?… Chido chemidhudhudhu chave pakati penhengo yese yeimba yaMick.
Kunze kwaBaba vake kuve shasha yenyika yeFormula One uye amai, a
mutambi wezvemitambo, kwaive nababamunini vake nababamunini zvakare- vaimhanyisawo vatyairi.
Kukurira mumhuri ine nhoroondo yakapfuma yemujaho, Mick akaona kuti aive nesarudzo shoma munzira yake yebasa.
Kutaura chokwadi hapana paaizotiza kuva mutyairi wemujaho sezvo baba vake vaifanira kunge vakamufurira zvakanyanya.
Heino tête-à-tête pakati pababa nemwanakomana vanozviona ivo pachavo vasina imwe sarudzo kunze kwekutevera tsoka dzababa vake- ngano mumotorsports.
Mick Schumacher Mhuri Kubva:
Tsika nemidzi, sezvavanotaura, zvine hunyanzvi pane hunhu hwemunhu. Chii chingave chakatangira mhuri yake?
Chokwadi ndechekuti, vabereki vaMick Schumacher zvizvarwa zveGerman uye Baba vake vanozvarwa kuHürth kuNorth Rhine-Westphalia kuGerman.
Apa ndipo patinotenda kuti mutyairi wemujaho ane midzi yemhuri yake. Uyezve, tinogona kugumisa kuti Mick ndiGermany-Swiss, achitonga nemadzitateguru ake uye nzvimbo yekuzvarwa.
Mick Schumacher's Dzidzo Yekumashure:
Mazhinji akafanana anoita kunge aripo pakati pehupenyu hwehucheche hwaMick Schumacher uye Max Verstappen. Kuna Mick, haana kumbotengesa dzidzo yake.
Iye Mudiki haana kumbopotsa makirasi achiri muChikoro kusiyana naMax akaita. Vaviri, zvisinei, vaive vane tarenda vadiki chaps vane zviroto zvekuve maChampions pasi pekudzidziswa nababa vavo.
Little Mick sekuona kwake, akatanga kuhwina mikwikwi kunyangwe iye akatarisa padzidzo yake.
Mick Schumacher Biography - Basa rekutanga:
Ane hope huru pamoyo, Mick akaita zvinodiwa- ndokuti, kugara uchidzidzira. Pazera ramakore mapfumbamwe, akanyoresa semutyairi weKart. Pakazosvika nguva yegumi nerimwe, aiziva kuti aida kuita Kart-drive.
Nehunyanzvi akapa rake basa kutanga kwake kwese kutarisisa. Izvi zvakamuona achikura zvishoma nezvishoma uye achitevera nhanho dzababa vake vakuru- kunyange kubata maziso ake.
Mick Schumacher Bio - Mugwagwa kune Mukurumbira Nyaya:
Munguva yemakore 2011 na2012, wechidiki akafambisa ADAC Kart Masters 'KF3 Kirasikoro mota.
Haana kungotanga kuhwina sezvo akakwanisa kubata nzvimbo yechi9 neyechinomwe kutanga.
Kusimuka zvishoma nezvishoma kwakauya paakawana nzvimbo yechitatu mu2013 German Junior Kart Championship.
Kunyoresa, muInternational Junior Kart Championship, Mick akapedza wechipiri mumakwikwi- a feat iyo yakaratidza kumwe kusimuka.
Panguva ino, kuita kwake kwakakwezva kufarira kwemapepanhau. Ino yakanga iri nguva, Jenzer Motorsports akabvunza Mick bvunzo yekutyaira yeimwe yavo supercars. Panguva ino, akazviona zvishoma nezvishoma achipinda mushangu dzaBaba vake veNgano.
Muna 2015, Van Amersfoort Mujaho wakasaina Mick kukwikwidza kosi yefomula kekutanga panguva yebasa rake. Kutevera munguva pfupi mu2016, akakwikwidza mukirasi yepamusoro Formula 2000 uye akapedza akateedzana munzvimbo yechitatu.
Nekudaro, mu2018, Mick akapedza iyo FIA Fomula 3 mwaka weEuropean kunge shasha, makumi mashanu nenomwe
yakajeka yechipiri-yakaiswa Ticktum. Panguva ino, zvakave pachena kuti aizozvikurisa pasina nguva.
Mick Schumacher Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Sezvo anga achiziviswa semutyairi weFerrari Driver Academy musi wa19 Ndira 2019, akasimuka akaenda kuFIA Formula 2 Championship.
Zvekare, uye zvishoma nezvishoma, akatanga kuswedera padhuze nenharaunda yababa vake uye izvi hazvina kuenda pasina kuhwina.
Musi wa 2 Kubvumbi 2019, Mick Schumacher akazopedzisira aita debut yake kuseri kwevhiri remazuva ano Formula One inotyaira mota Scuderia Ferrari's SF90.
Akanyora nguva yake yakanakisa ye1: 32.552 kubva ku30 laps. Kuita seizvi kwakamuisa sechitanhatu nekukurumidza pakati pevamwe vatyairi.
Iwe hausipo izvozvi, Mutyairi wemuGerman Mutyairi ari kurarama zvake nhaka yemhuri. Ndinovimba, munguva n, achavhara baba vake. Zvimwe zvese, sekutaura kwedu, inhoroondo.
Mick Schumacher Musikana Musikana, Wife, Vana?
Mutyairi weGerman mujaho, pasina mubvunzo, ane mamirioni evanoyemura kutenderera pasirese. Vazhinji vavo vanhukadzi vanoshuvira kuve musikana wake, mukadzi, kana kungova mai vemwana wake kana vana.
Runyerekupe rune izvo kuti anazvo, zvirinani kuve muhukama humwe asi asina kuroora panguva yekunyora Bio yake.
Mick Schumacher Hupenyu Hwemhuri:
Kungofanana naMax Verstappen, hazvisi nyore kupatsanura kubudirira kwake pasina kutaura nhengo imwe chete kana kupfuura dzemhuri yake.
Pano, tichakuudza zvakawanda nezvevabereki vaMick Schumacher kutanga nemusoro wevana vake.
Baba vaMick Schumacher:
Kwemakore, mijenya yakataurwa pamusoro peGerman racer ngano akaita zvese kuti mwanakomana wake arambe achirarama zviroto zvemhuri.
Mick Schumacher's Baba ndeyeGerman akasiya basa mujaho kutyaira ngano akazvarwa pazuva re3 Ndira 1969. Iye akazvarwa kuna baba veBricklayer, kuNorth Rhine-Westphalia, Germany.
Munguva yake, Michael akazova iye chete mutyairi munhoroondo kuhwina manomwe maFormula One World Championship, mashanu ayo akahwina zvakateerana.
Akaroora Corinna Betsch, uye vose vakakomborerwa nevana vaviri, Mick nehanzvadzi yake, Gina-Marie. Heino mufananidzo wevakaroora vakanaka- Michael naCorinna, panguva yemuchato wavo.
Baba naAmai vaMick Schumacher pazuva remuchato wavo.
Baba vanohwina mubairo havafariri mukurumbira wevatambi venhau vanokanda kwaari. Kunyanya zvakadaro, anofarira kutasva mabhiza, kutsvedza, uye kutamba nhabvu.
Zvisinei zvinosuruvarisa kuti Michael akaita tsaona achikwikwidza nenjanji naMick mugore ra2013. Zvinosuruvarisa, ngano yemujaho wechiGerman yakamisikidzwa pakurapwa nekuda kwekukuvara kwehuropi.
Nekutenda, nekufamba kwenguva, Michael akapengenuka. Aizivikanwa kuti achiri nemhasuru atrophy uye osteoporosis nekuda kwekuvharirwa kweanopfuura matanhatu (6) makore kumubhedha wake. Nekuda kweizvozvo, anga asiri paruzhinji kubva netsaona yake.
Amai vaMick Schumacher:
Chekutanga uye chakakosha, iye zvakare mutambi wemitambo- mukundi, semurume wake. Corinna Schumacher née Betsch mutyairi webhiza ane tarenda akambohwina Mukwikwi weEuropean muchimiro chekumadokero chekutasva bhiza.
Corinna akazvarwa pazuva re2nd raKurume 1969 kuna Gabriele Betsch amai vake. Nhasi, amai vaMick vanonzi seGerman murwiri wekodzero dzemhuka uye akabudirira mutasvi webhiza. Kufanana nemurume wake, Anoratidzika kunge ari padyo nemwanakomana wake.
Kutenda kune zvaanozvivaraidza nazvo, Corinna naMichael vane varidzi vemabhiza muSwitzerland neTexas, US. Kubva tsaona yemurume wake yekukwira nenjodzi, akaramba achitsigira kumuchengeta.
Munin'ina waMick Schumacher:
Nevazhinji vanoda zvemitambo mumhuri yake yemitambo, hazvishamise kuti hanzvadzi yake mukuru, Gina-Marie, aisazotora mitambo sebasa rake.
Kunge amai vake vemitambo, Gina-Maria Schumacher mutasvi webhiza. Iye akazvarwa pazuva re20th raFebruary 1997, makore maviri pamberi paMick. Panguva yekuisa iyi Bio, Gina-Marie anotasva mabhiza padanho risiri rehunyanzvi.
Nezve Hama dzaMick Schumacher:
Tichitarisa kune dzimwe nhengo dzemhuri yakatambanudzwa, ngatitangei nasekuru vaMick Ralf Schumacher. Akaita makwikwi muFormula One kweanenge makore gumi, kubva 1997 kusvika pakupera kwa2007.
Sekuru vaMick Sebastian Stahl aivewo nyanzvi yemutyairi wemijaho kubva kuBelgium. Heino pikicha inotonhorera yaRalf Schumacher, ane hukama nababa vaMick.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, muzukuru waMick, David Schumacher, zvakare mutyairi wemujaho. Ndisingakanganwe, ndisekuru nasekuru vaRace Driver, Elizabeth naRolf Schumacher.
Mick Schumacher Hupenyu hweMunhu:
Tichiona zvakadzama, asi kure nehupenyu hwake hwekukura, isu tinotsanangura Mick sekudzikama. Zvakare, ane hunhu uye anogamuchira munhu- uyo akasununguka kutaura nemunhu wese uye achiratidza kufarira hurukuro.
Chokwadi ndechekuti, Mick anoda kugara achizvininipisa mukudzivirira mukurumbira waBaba vake kusvika kumusoro wake. Mick anoonekwa pano neshamwari mushure mekuratidzira kwenhabvu nhabvu- hunhu hwakaderera.
SaBaba vake, mutyairi wenhangemutange anonakidzwa nekutamba nhabvu sechido chekutandarira uye mareferensi kwete mumwe kunze kwababa vake semurairidzi wake.
Mick Schumacher Mararamiro:
Iwe unofunga ane hupenyu hwepamusoro here? Chokwadi ndechekuti,… haadaro. Kunyangwe, kunyangwe hazvo hunhu hwaMick hwekuyedza kuvanda kubva pakuvhenekera, iye ane zvinhu zvakakura zvinoratidzira yake inert flamboyancy.
Mick Schumacher Imba Yemhuri:
Vane chivakwa chinozvikudza garaji rine simba rinokwanisa kuve nemota dzakawanda kupfuura zvaungafungidzira.
Kuona izvi kekutanga hazvishamise sezvo baba vake vanonzi vane mari inodarika hafu yebhirioni yemadhora pamudyandigere.
Mick Schumacher Net Kukosha:
Kwekutanga sosi yehupfumi hwake inofamba ichitenderedza kuve nyanzvi Car Mujaho mutyairi Kunyangwe zvake zera diki uye richiri kukura basa rakabudirira, mambure ake anokosheswa- kutenderera $ 5 mamirioni emadhora anotaridzika kunge anonakidza.
Mick Schumacher Untold Chokwadi:
Muna 2014, pazera remakore gumi nemashanu, Mick akaita tsaona inotyisa '15mph' paaidzidzira paLausitzring speedway track muBrandenburg, Germany.
Izvi zvakauya mazuva mashoma mushure mekutanga basa rake reF4. Sezvineiwo, tsaona haina kuona kupera kwebasa rake.
Chitendero chaMick Schumacher:
Kunge baba vake veNgano, Mick zvakare muKaturike uye anotevedzera dzidziso dzayo. Kamwe muna 2015, baba vake vakataura nezve musangano wake wepamoyo naPapa John Paul II.
Sezvakataurwa na ratidza, shamwari dzemhuri yake dzinoenda kunonamata kunzvimbo inoyera yeKaturike yeLourdes kunonamatira kupora kwababa vake.
Mick Schumacher's Bio Dhata
Zita rizere: Mick Schumacher
Zita rekudanwa: Mini Schumi
Zuva rekuzvarwa: 22nd yaKurume 1999
Nzvimbo yekuzvarirwa: Vufflens-le-Château, Switzerland
Nhamba Yemota: #5, 25, 29
Baba: Michael Schumacher
Amai: Corinna Schumacher
Hanzvadzi sikana: Gina-Marie Schumacher
Hama: Ralf Schumacher (Sekuru), Sebastian Stahl (Nhanho-Babamunini), David Schumacher (Cousin) uye Baba Vababa (Elizabeth naRolf Schumacher)
Net Worth: $ Miriyoni 1
Hobbies: Kutamba Nhabvu
Hurefu: 1.70 (metres) / 5'7 "(tsoka inches)
Social Media: Instagram (@mickschumacher) uye Twitter (@SchumacherMick)
Residence: MS Tracy SA, Avenue Du Mont Blanc 14b, Gland, Switzerland
Mukufamba kwekuverenga iyi Bio, takadzidza kuti vabereki vaMick Schumacher, kunyanya Baba vake vanga vari pesvedzero huru mukukura kwebasa rake uye kuita sarudzo.
Kuuya kubva kumhuri yemitambo kunobatsirawo kuhunhu hwake hwakatanhamara semutyairi wemujaho.
Pasina kupokana, ikozvino kupfuura nakare kose inguva yakakodzera yekuti Mick arambe achirarama zviroto zvaBaba vake vasina kumbove neakanakisa emakore apfuura.
Kutenda nekutora nguva yekuverenga inoyevedza Biography yaMick Schumacher.
Ndokumbira tizivise pfungwa yako paMutyairi weRace. Zvakare, tizivise kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingataridzike muMemoir yedu.